somalimidnimo.com » DHAGAYSO: Sheekh Xasan Daahir Aweys Oo Fariin U Diray Shacabka Soomaaliyeed Kana Hadlay Dastuurka
DHAGAYSO: Sheekh Xasan Daahir Aweys Oo Fariin U Diray Shacabka Soomaaliyeed Kana Hadlay Dastuurka May 5, 2012 - 25 Comments	Sheekh Xasan Daahir Aweys oo kamid ah masuuliyiin xarakada mujaahidiinta Alshabaab oo salaadii jimcaha shalay kadib kahadlay masjid kuyaala Dagmada Lasfoole ayaa iftiimiyay arimo badan oo kusaabsan hardanka kataagan giyiga Soomaaliya ee udhaxeeya shisheeyaha soo duulay iyo mujaahdiinta Soomaaliya.
Sheekh Xasan Daahir Aways oo aad ay udheereed kalimadiisa qayimka ah ayuu ugu baaqay qabaailada Soomaaliyeed inay sii laba jibaaraan kaalintooda ku aadan dagaalada xaqa iyo baadilka udhaxeeya ee kaholcaya Soomaaliya.
Sheekh Xasan ayaa sheegay in waxa ay kal hore kadigi jireen ay hada soo muuqdeen isagoo soo hadalqaaday shariif sheikh Axmed oo u ololeenayo ansixinta Dastuur Gaaleedka.
Sheekh Xasan ayaa sheegay in Dastuurka ay wataan gaalada uusan kahir galin Doonin Soomaaliya,Shacabka iyo Mujaahidiinta oo midaysana ay kahortagi doonaan waxyaabahaasi la soo dhoodhoobay.
Sheekh Xasan Daahir Aways ayaa ku celceliyay inuu socon doono dagaalada jihaadka ee kajira Soomaaliya,wax wadahadalna lala gali doonin qolyaha ay furaha u ahayaan Gaalada Caalamka
somalimidnimo.com « PreviousCiidamada jabhada wilaayada Galguduud oo gacanta kudhigay askar Itoobiyaan ah kadibna……..	Next »DHAGeYSO: Shirkii Odayaasha Dastuurka Ansixinaya oo Furmay iyo Wadaaddo laga Saaray Shirka!	25 Responses
liban qasin fidow says:	May 5, 2012 at 1:39 pm	masha alaah shiikh xasan dahir ilahay ayaa kula jira
hana ku barakeyo ayan ale kaga baryayna hana yeli nina
dastuurkii ilahay qoray mahane midkale kana subxana leysta kuwa
tagersan dastur an dinta ilahay qorin kuwa adeecsan ilahayna lama jiro kuwa
Reply	dulmi diid says:	May 5, 2012 at 3:01 pm	asbuuc kahor soo tad oo soo qorteen waa cuna doon talo ku caadtey (sha xasan daahir)?
Reply	xaqaani says:	May 5, 2012 at 3:01 pm	Dastuur ilaah baa noosoodejiyey
oo diinta nagu tooshey dooni meyno
dimuquraadiyad iyo hadalka daanyeerta
kadagaalnay in dadkayaga duli lagu beero
denbi dhaaf ilaah baa leh iyo dunida
tiirkeeda dam damleeynta gaalada maba
dareemeyno dagaal baan diyaar unahay oo
hub baa deegta noosurane kuduqeeya
ilaa dalkaan diinka laga oogo duruufaha
nahaysta iyo diifta nagutaala debci meyno ilaa an
dibnaha bixino doofaartaan doolka lagu
keenay dadka qaarki dabcigaa kalumay oo
waa duunyadoo kale, e dajaal bay kadaba cara rayaan
oo duufsadoo siraye daaqad buu kasoo galay qalbigii
durufka ahaaye dhaguhuu damsiiyey oo indhuhuu
dabool kasaaraaye dacar buu umariyey afka kuna
daneystaaye dajaal wuxuu doono mooyee
waxkale waakadiri raane daban daabyo bay kula
kacaan dumar iyo waayeele waxay dilaan qofkii
diinleh oo ilaah daa, im ah yaqaane diintii
ilaahna dacaskay saartaane madamqiso dareen
soomaaliyeey iyo dumarkaan ooy naaya duqayn bay
kuharqiyaan meeshii diinta laga oogo isdaba marinta
iyo waxaa lagu gartaa kuwaas daalin nimadooda
Reply	real wadani says:	May 5, 2012 at 3:49 pm	asalamu alaikum
Walaalayaalow soomali qaarkood caqli xumada ma is yeel yeel bay ka tahay mise waa ka dhab.
Dastuurka waxaa tusaale ahaan ku jirta inta ay xubnaha golaha wasiirada ka goobnaanayso, sida ay beelaha u qeebsanaayaan iyo qaab dhismeedka dowlada sida maxaa waxaan yeelanaynaa madaxweeeyne iyo madaxweeyenu ku xigeen sida wadamada qaarood mise waxaa yeelanaynaa madaxwayne iyo ra’iisul wasaare.
In saas loo heshiiyo diinta islamka kama hor imaanayso.
Quraanka waxaa ku taalo hala tukado laakiin kuma taalo meeqa salaad iyo intee rakacadood salaad kasta ayaa la tukanaaya, taas waxay ku taala xadiiska. Quraanka iyo sunadda waa kaamil siiba arimaha waa ween, laakiin wixii umad u gaar ah sida wasiirada loo qeebsanayo lagama helaayo quraanka iyo xadiiska taas waa wax ay dadka ku heshiinayaan oo ilaahay subxanahu wa tacalaa xor inoo siiyay in aan ka tashano ayaad quraan aha baa dhaheeso washaawirhum fil amri, marka waa in dadka ku heshiiyaan ayagoo diinta ka hor imaaneen.
Dastuurka waxaa ku taalo diinta islaamka diin aan aheen wadanka laguma fidin karo iyo diinta somaaliya waa islaam kaliya, Marka is waydiiya ma dastuur gaalo ayaa saas qori lahaa. Hadii dadka qaar ay leeyihiin anaga dhibka ayaa isga rabnaa waa wax gooni ah.
Reply	looyaan says:	May 5, 2012 at 3:51 pm	Aways-Almujaahid-Dastuurkuu usoo dagaalamayey 40-sano ayaa lagu xukumayaa soomaliya.
Inaynu wax isu sheegno oo isasaxno waa amaan ee cadaawad iyo cay midna maaha.
waxaa cay iyo cadaawad ah Gaalbaan hoosgalayaa kuwa sharciga alle u dagaalamayana waan caayayaa waana la colaytamayaa.
horbooda gaalada inta aad idinka iyo gaaladaba afka ciida idiin galinayno insha allah.
Reply	umu_barau says:	May 5, 2012 at 4:23 pm	Maashaa Allah sheikh xasan daahir aweys kheyrkaan u rajeynayey Allah iguma qadin! Allah ayaan ugu mahad celinayaa, Allow ku xifdi oo ku barakee ustaad xasan dahir aweys camalkan wanaagsan waa u soo qariibay waana ninkii billaabay. Allah waxa aan ka baryayaa inuu u dambi dhaafo ciribtiisana sugo mathalkiisana noo badsho yaxfidkallah sheikhanal faadil Amiin.
Reply	sayfulahi alsomaliyi says:	May 5, 2012 at 4:45 pm	to real wadani
walaalkayow rabigay baan kaaga baryayaa hadaayo adiguna ka dalbo danbidhaaf. hadii aad tahay mid aqoon u leh the real meaning of governmental constitution ma aadan ahaateen mid sidan u hadla waaba hadii aadan u kasayn. dastuurku waa sharci ay samaysteen bulsho taasoo oo ay dhexdooda isku xukumaan. suaasha kowaadi waa ma bulshada ayaa samaysan karta dastuur iyadoo alaaah subxaanah usoo dajiyay dastuur iyo shareeco dhexdooda ah oo aan geesna laga mari karin. hadii ay tahay jawaabtu haa oo dastuur waa la samayn karaa taas micnaheedu wuxuu ku cad yahay kitaabka rabigay oo ruuxii ama bulshadii ama sida hadeer ay u wadaan qabiilkii ka dhaga adayga yabooha rabigay dajiyana dastuur waxaa uu rabigay ku cadeeyay GAALNIMO mana ahan mid aan anigu samaysanayo ee kitaabka rabigay ku noqo ayaada micnaheedu tahay. ( ruuxii aan ku xukumiyin dhexiisa ama bulshadii aan dhexdeeda ku xukminyin xukunka alaah soo dajiyay waxaa uu kamid yahay/kamid yihiin GAALADA) . taas waa mida kaaga flan jawaabta haa. hadii ay tahay jawaabtu maya waad asiibtay oo rabigii koonkan abuuray adigana ku abuuray ayaa kalli u ah sharci-dajinta oo ah dastuur. tan kalle waxaa la yaableh jaahilnimada aad ku hadlaysid oo runtii cajab galinaysa cid kasta oo diinta rabigay ka run sheegaysaa. walaalkayow waaba hadii aad tahay walaalkayga islaamka in kastoon anigu kaa arko gaalnimo mulxida taasna waa inaan kuu cadeeya ma ahan in aan ku maldaho ee ilaah usoo laabo kitaabka rabigayna ma ahan mid wax ka dhiman yihiin taasina waa wax hadal cajiib ah oo kasoo yeeary afkaaga waana inaan kugu xukunaa mar ;labaad inaad kaasna ku tahay mid ku gaaloobay rabigiis marba hadii aad tiri wax muhiim ah ayuu rabigay ka noqday qaafil. nadaamka wasaaradaha iyo waxa looga governmental institution waxaa la sameeyay wixii ka danbeeyay burburkii kaniisadaha catholicga waxaana sameeyay madhabka kiristanka ah ee prostestant si ay ula dagaalanto baadiriyada kaniisadaha ku maamulayay DAARUL KUFR ama reer galbeedka. marka arrinkaas dalkan daahirka ah ee ardul-xabashana oo ay soomalia waxa loo yaqaano kamid tahayna waxaa laga hirgaliyay wixii ka danbeeyay boqorkii gaalka ahaa ee minilik. waxa hadeer soomalia loo yaqaanana waxaa laga hirgaliyay 1962. markaa waxaa cajiib ah in aad u ragatid fikir asalkiisubna noocaas yahay in ay tahay wax lagama maarmaan ah oo sharci laga dhigto maadama ilaah uusan waxaas dhexdeena ku xukumin. hadii aad tahay mid wax fahmaya anigu ulama jeedo fariitayda inaan kugu sameeyo supresion lakiin kaliya waxay iga tahay inaan kuu muujiyo waxa aad adigu u taqaanid kaftan ama fadhi-ku dirir inaad diinta aad sheeganaysid uga baxaysid. markaa waxaan kusoo gunaanadi lahaa intay doontaba ha qaadatee diintaan way ka guulaysanaysaa cadawgeeda midka muuqda ee isagu stretegiyada iyo planning kan aad adigu diin u haysatid dajinaya iyo midka adigoo kala ah oo ay ka qaalib noqotay jaahilnmo caadifad iyo gaalnimo. walaahi kuguma xukumayo waxaan ahayn gaalnimo waayo waxaan ka arkay ficilkaaga iyo cadaawda aad diinta iyo sharciga rabigay u qabtid oo aad u uga dhigaysid inferior aan kaamil ahayn wax wayn oo bulshadu aanay ka maarmina ka maqan yihiin waa sida aad hadalkaada ku sheegtay.
asalaaamu limani tabacal hudaa
alahu mansur diinak waman nasar
Reply	bukhari says:	May 5, 2012 at 4:53 pm	umu baru wad ficantihin hadaad sh xasan u ducaynaysaan waxaan ba islahaa odagu waxbu radiyay oo daqadaa lagala bixi lahaa waloow uu yahay nin mel adag ka soo jeda oo aan lagu de g degi karin
hadana waxan islahaa shabaab u joojin mayaan waxaas kkkk
wa arin fiicanee bal sidaas ku wada oo is dajiya oo wixii laydin ku qabsado
diin ahan u gar baxa
wadadu wa bini adam oo wa khaldami karaan adinkuna macsuum matuihid oo waad qldami kartaan
Reply	ma dawaa dhagar ku faanka dhiiga muslim says:	May 5, 2012 at 5:54 pm	SHEEKH XASSAN AWAYS ISBUUCAN SAXIIBAAD LA TIHIIN BAAN UMALAYNAYAA?
Reply	umu_barau says:	May 5, 2012 at 6:07 pm	to; magaca aad wadatid waxa uu ahaa nin diinta u soo halgamay khilaafkana ka hor tagi jirray jeclaana inay islaamku is raacaan, waxa uu caan ku ahaa bukhaari raximahullah inuu daniga islaamka uu,u qabo wanaajin jiray waxaanan kaa rajeynayaa mid dhaqankisii leh. haddii aan dib ugu laabto al shabaab ayaan is lahaa inay daaqada kala baxayaan!!! waa arrin been abuurad cad ah danigii islaamka lagu yaqiinayna ma aadan kasban ee Allah haku sollan siiyo, mideeda kale tan ah wadaada,du maahan macsuumiin ee haloo dhimriyo waan kaa qaatay Allah miisaanka xasanaadka ha kuu saaro, waxaanse kaa codsanayaa adna inaad al shabaab u cudur daarto maada aysan aheyn macsuumiin, oo ay bani,aadam u yihiin khaladkooda! Allah umada ha garansiiyo wanaaga iyo xaqa leysku leeyahay, Allah ayaa garanaya cida diintaan ay sababtood ku istaagi doonto inta ka horeysana takfiirinta iyo meel ka dhaca wuu socon saa dad inaga kheyr badan ayaa is takfiirin jiraye. waxaan ku soo gaba gabeynayaa Allah hana waafajiyo waxa uu jacel yahay oo uu misna Allah raaliga ka yahay, inta dhibka heysto Allah ha garab gallo sabur iyo sugnaanshana ha siiyo Amiin walaahumustacaan.
Reply	caaqil says:	May 5, 2012 at 8:56 pm	MUJAAHIDIINTA IYO SUXUUFIYIINTA ISLAAMKA IYO CULIMADA RABBAANIYIINTA KOR,DAAQUUDKA SHEYDAAN IYO GUMEELGAAR HOOS IYO JAHANABA HOOSTEEDA HAKUDHACAAN
Reply	SU AAAL says:	May 5, 2012 at 9:13 pm	reer puntland maxeey gaalada u jecelyihiin ama danahooda u fuliyaan ama usoo wataan ciidankooda ? toloow itoobiyan ayay keeneen maantane waxey leeyihiin dastuur ayaa wadnaa aaway dastuurkii uu alle soo dajiyay war somaliyey nimankaa kalsooni daro aya heysa oo somalida waxbo lama qeybsan karaa cabsi ayan kujirta mana ku kalsoona ragatinimadooda walahi
Reply	umu_barau says:	May 6, 2012 at 1:47 am	reer putland waxaa ka mid ah kuwa buuraha golis saarran! iyaga maaha miyaa reer putland? waxaa kaaga habooneyd inaad tiraahdo dadka daquudka taageera ee reer putland sidaa daraadeed warka qurxi umadana ha isku wada qaban Allah ha ku barakeeye su,aal weydiiyoow indhaha kala fur koleyba waxaan u arkaa inad ka dhacsan tahaye.
Reply	umu_barau says:	May 6, 2012 at 2:29 am	taariikhaha aan baalka dahab ka ku qorray ayaa waxaa ka mid ah in sheikh xasan dahir maanta markuu Allah diintiisii difaacayna ay 12 qofood reebeen comment!!! maalintii khabarka aynaan jecleysan soo yeereyna ay 84 comment reebaan!!! halkaas waxaan ka daremayaa in cadaaladu ay nagu yar tahay haddii aan qaldanahayna aynaan aqoon inaan Allah u noqono! waxaa cajaa,ib leh in sheikh umal uu ka hadlay arrin muhiim ah! waxaa laga reebay 40 comment oo inta badan lagu durayo sheikha, ma yeeli karnaa in culumada inagoo durrin waxay saxaana Allah u weydiino sugnaansho waxay qaldaana aan Allah u weydiino cafis!, xageey iska qaban la,dahay!, maxaan ugu dag dageynaa duritaanka culumada! sidaa daraadeed waan idin nasexeyn nafteydana waan u naseexeyn aan ka waan towno waxa aan ku dureyno culumada aan isku soo dhaweyno aan ka qeyb qaadano sidii aan uga hor tagi laheyn khilaafka culumada wax dan ah nooguma jirraan, jiilkii badali lahaa culumada ayaan nahay kamana shaqeyno maslaxada saxwada, ma sidaan ayaan diin ugu gargaareynaa? Allahu Akbar qof walboow is xisaabi intaan lagu xisaabin isna miisaan inta aan lagu miisamin! Allahayoow iga cafi inta sheikh ee aan dambi ka gallay iyagana u dambi dhaaf subxanaka yaa Rabi, Alla maxay gacmaheyga bello qorreen yaa Rabi nafsii halla ordaan run mooday walee.
Reply	Abdinur says:	May 6, 2012 at 5:33 am	Sheekh Xasan Jasaakalaah.
Waxaan kalmadeyda ku koobayaa anigoo ka hadlaya dastuurka
1.Dastuurku waxaa ku qoran in diinta islaamka ay tahay diinta umada soomaaliyeed (hadal sidaa u qoran) Ilaah baa idinku dhaarshee ka warama maantay dad isku tagay hadii ay inoo go’aamiyaan inaan ahaano dad muslimiin ah kuna dhaqma diinta islaamka beri sow ma dhici karto in kuwo kale ay yiraahdaan diinta soomaaliya lagu xukumi doono waa kiristaan. Ilaah baan ka magan galnay waxay wadaan. Ilaah baa nagu maneystay kitaabkiisa inaan ku dhaqano mahadaasna ilaahbaa iska leh.
Reply	abuu salman says:	May 6, 2012 at 6:00 am	asc walalayal 1 dasturkan waxaa dajiyay waa galo
2 dadka iney ku dhaqman larabana waa islam
hadaba maxaa inoga adan \_
waxan shegeynaa xukunkisa iyo sida alle u inoga digay waxan dasturku asaga ino so dajiyay ahayn Cidii Dajisay waa Gal 1 cidii xayasiisa waa gaal 2 cidi u xukuntanta aydoo ogna waa gaal 3 inta ku tagerta galnimadasna wa kafara wye
ilaah aynu ka cabsano on ilalino kitabka alle iyo sunada nabigena muxamed S/c/W
Odayashan Iyo Saladintan Goor U Sh Boqol Son Raximahu allh sheg miyaa hada ahayd
iney badankoda murtadiin yihin
ilen urkey galada ka jecelyihin shacairta islamkey necebyihin
kitab alle waxab ahayn bey waligod tolkoda ku xukumi jireen o hadii gar iska galan qabailada waxay ku kala bixi jireen 1 gar toleed ma doneysaa / o micnehedu yahay xerka tolka u dagan 2 ama gar cadawo / o micnehedu yahay kitabka alle waa dad sidaa waligod galo u ahaa ilaa intuu alle u naxaristay moyee
e somaliyeeeeeeeeeeeey cadab yaan la shaqeysan e qof walibo inaga mid ah an korkena ka ilashano ciqabta alle
ilen alle waxba kama dhibeyso hadan dasatir isku xukuno on sida ku dhimano boqortoyadisa waxba uma dhimeyso
kitabkisa on qadanana waxaba kuma soo siyadineyso alle boqornimadiisa balse waa wax anaga ino dan ah aynu garno danaheyna dad wa laciif intii horeysayna way wada dhinten intaynaana waynu soconaa hadaba an hagajino wada aynu alle ku cabudeyno
Reply	muslim,somali and puntlande boy says:	May 6, 2012 at 6:07 am	to umu_barau
walaal hadii aan kaaga mahad celiyo jawaabta aad siisay SU AAAL
qofka labaxay, mideeda kale hadii aan fikradayda ka dhiibto sababta 12 qof ay komontis uga dhiibteen maant shiikh xasan daahir iyo sabaabta 84 comment ay ureeben maalintii hore. waxaan is dhihi karaa waa labo sababood oo kaliya
1)waxaa meelkasta ku arkaysaa shiikh garwayne oo taagan. micnahayga wadaadada intoo dii badnayd waxay noqdeen ku u adeega dahana reer galbeedka markaa dhalinyardii waxay saska qaadeen wadaadkii inyar un leexda waxay isleeyihiin waa la shaqaalaysiiyay odaga…….
2) waxay dhalinyarada katahay baan islaayahay waa un toosin shiikhii leexda lugu toosinayo waxaana shacabka mulimka ah loo cadaynayaa in shiikh hebel uu leexday hada laakiin ma hubno inuu sidaan sii ahaan dooono ama toobad keeni doono
Reply	umu_barau says:	May 6, 2012 at 6:35 pm	to; muslim,somali and putlande boy walal adigaa mudan, fikirkaga aniga ma dhahaayo waa qaldan yahay waana aad da,daashay waxaase igala qurux badan sheikha kuwii shalay u fakanaayey inay hada u duceeyaan ugu yaraan walina ma hayo hal qof oo tacliiq ka reebay, waxaad tiri, waxaa wadaadadii u bateen kuwa danaha reer galbeedka u adeega!!! walal anigu ma diidin sheikh danaha reer galbeedka fulinaaya, ee waxaan diidanahay haddii aan shalay ku heysanay sidaa,oo uu maanta Allah sollansiiyey maaha inaan u diidno libta oo aan xaasidnimo ku sifowno! marka dadka kuwa fogaaday iyo kuwa dhow yaan leysku qaban, waxaa dhici karta jahlinimo inay u geysay, imisaa waxay shalay lahayeen maanta si kale leh! marka aynu ka qeyb qaadano islaaxa islaamka ayey iga tahay. mideeda kale aniga si wax waa iila muuqan kartaa waana ku qaldanaan karaa waana ku sax sanaan karraa marka haddii leygu radiyo qaladkeygii oo aan la ii naseexeyn barako ma leh mana lihin sifaadkii muminiinta Allah ku amaanay, ikhwah aan isa saxno. dad ayey kaga dhagan tahay inay wepsadyadaan cay ku soo qorraan kuwa kale qabiil, nabiga waxa uu yiri isaga taga waa qurun qabiilkee, marka wadaadadu waxay qaldaan si eedaab leh u radiya laakiin wuxuu shalay u qabtay islaamka haddii uu la soo daaho in lagu dhahaa waad la soo daahday bal meesha ay diinta kaga qorran tahay hala ii sheego. qadarta Allah aan rumeyno Allah ayaa hada solansiiyey sheikha wuxuu qaldana sheydaan ayey ka sugnaatay oo sambariirixiyayee aan wax badan xeerino saxitaankana yeynaan qalad ka fahmin sidaan saxid maahee. walalkeeyoow ma adigaa Allah ku weydiinayaa inay sida tan saxitaan tahay in sheikha la dhaho waa la soo daahay? waa hadal jees jees ah, muminiinta Allah waxa uu amray inay isku naxariistaan is masaamaxaan is garabsiiyaan, qofka inaad radiso waxay ka mid tahay cilmiga balse si diinta aan noo diideyn aan isku radino! qofkasta maalin ayuu gafayaa qofkii jeceleysan doono in loo shafeeco qaadoow, maanta muslimiinta u shafeeca qaad wixii Allah ku barayna ka sheeg oo ha qarrin xaqa. waxaan ku soo gabagabeynayaa malaga yaabaa inaan aragno dadkaan aan dureyno hada inay diinta sababtood ku istaagto? Allah wax ba kuma ahan daniga aan wanaajino ikhwah.
Reply	jeylan says:	May 6, 2012 at 6:53 pm	askm.koleey sheikha x.takar wa nin hore adun u so bur buriyay,laakinse ilah ha u dambi dhafo asiga,iyo muslim walbo o dinta ku dhaqankeda u dagalama.
Reply	qorane says:	May 6, 2012 at 7:05 pm	ku:umu_ barau.
waan kusalaamay ukhtii salaanta ugu qaalisan a.w.wabarakaatuhu.
waxaa kuu jawabaabay walaalka puntlande boy wuuna mahadsanyahay .
hadaanse anigu wax yar kudaro.
sababta commentigu ubatay kana uyaraaday waxaan isleeyahay waxay tahay labada arimood ayaa kaladuwan.
qodabkii hore ee aad leedahay commentiga ayaa badnaa sida aad uragtay anigu uma arkin ee aad leedahay sheekha ayaa laxag xagtay.
bal dadka intiisa badnayd waxay lahaayeen maxaad GOB islaamow hadalkaan uleedihiin sheekha.
kuwa kalena waxay lahaayeen sheekhu maxuu arinta publik ugadhigayaa oo muu hoos ulahadlo walaalihii.
- wax sheekha jaa ifeeyayna ma arkaynin anigu.
hadii la iskusooxooriyo hadalku waxuu ubadnaa Gob islaamow hadalkaan
maqabto sheekh xasan.sheekhana mahaboonayn inuu halkaan kadhaliilo mujaahidiinta
intaas baa dheeraysay ayaan odhankaraa walaashayeey.
hadaan qac karasiiyo waxaan leeyahay waxuu kuhadlay sheekhu waxii looga
bartay oo ahaa inuu diido baadilka. -
waxa marwalba dhacana waa shay iska caadi ah oo aan lalayaabaynin.
walaal waxaad aragtay sheekh cali dheere oo mar walba shir jaraa,id qabana wax commenti kabixinaya ma aragtay .madhihi karaa sh.cali hadalkiisa lamadoonayo ?
maya maya maya . waa ladoonayaa lkn dadku waxay falanqeeyaan waxii cusub
marka hadalka sheekh xasan daahir waa lagu raaxaysanayaa ee wax layaable
yuusan ahayn oo waa wax mar walba dhaca.
hadalkii horese dad badan ayuu niyad jabiyay -
waxaana kamida adiga umu_barau ah .
waxaana kuleeyahay walaashayeey ilaahay hakubarakeeyo e haniyad jabin.
agow ukhtii aduunyadu waa imtixaan .
jihaadkuna waa wax yaalaha ilaahay umada ku kalasaaro.
miyaan iska hadlayaa bal ila akhriso qaar kamida ilaahay qowlkiisa.
قال الله تعالي:ولنبلونكم حتي نعلم المجا هدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم
waxaad lasocotaa in jihaadkan lagu kalamiirmay.
waxaan ulajeedaa dad jihaad kii kujira iyo dad diidan .
dadka diidan waxaa kamida wadaadad ictisaam ee aad kashalaynayso wax
waxaana yaqiinsanahay in ilaahay qalbiga gagadiyo.
waxa ladifaacayo ayaa kawon culimo.
shalay waxay nugu tirtirsinayeen ayay maanta nagu haystaan.
mashaki baa kaagajira in jihaadku waajib cayni ah yahay.
waa ijmaacul culamaa in uu jihaadku waajib cayni ah yahay sooma aha.
hadaba ninka inkira ijmaacul culamaa maladhi karaa culamaa.u suu? jwbta adigaan kuu daynayaa.
walaal waxaa jira culima badan uu ictisaam ama kuwa kale oo aan jihaad kujirin.
lkn cid wax kasheegaysa ma arkaysid sabab?
sababtu waxay tahay soomaalidu waxay dhahdaa banaan kiis mare maradiisu xana maqabsado.
guntii iyo gabagabadii majeclayn inaan kuujawaabo adiga oo gabadh muslimada .
iga raali noqo hadaan kuu gafo .kolay aniga ugaf ismalihi.
waxaana kuleeyahay anagoo dhan ayaa ubaan ducada ,e noosoo wada ducee
ha uducaynin culimada oo kaliya walaashayay.
waxan kuu rajaynayaa inaad kamid noqoto gabdha gundhiga unoqdoona khilaafadu raashiida idan ilaahay .
Reply	umu_barau says:	May 6, 2012 at 10:04 pm	to qorane. walal niqaashkaaga intaas cadaalad darada ah ee aad tiri cid xag xaganeysa ma,aanan arkin ayaa iiga fillan waxaan maleynayaa inaynaan isku si wax ba u fahansaneyn kuguna durri mayo. mida ah maxaad uga shaleyneysaa inaad ictisaam wax ka sheegtay!!! walaahi waan ka shalaayey wax ka sheegooda iskuna mid maahan waana ka soo hor jeedaa in umada isku fikir laga wada aamino. mida ah ma shaki ayaa kaaga jirra in dagaalku fardul cayn yahay!!! waa su,aal u baahan jawaab waxaase jawaab kaaga dhigayaa nafta inta ay igu jirto insha Allah ma badalaayo manhaj kayga cidina ugama rabo amaan iyo garaado! laakiin ayaa ii daba taalla walal aan dib isugu noqono wax badana aan saxno cadaaladana yaan laga tagin. culumada kuwa dastuurka u sacaba tumaya iyo kuwa horey intey ugu sacaba tumeen maanta ka noqday yaan dambigii hore lagu maxkamadeyn!!! waa iga tallo, Allaa nasiixu annakhtalifa wanabqaa ikhwaanan, sidaa waxaa yiri imaamu shaafici mas,allo diin haleysku khilaafo laakiin culumada yaan daaqada laga sii turrin oo naf iyo sheydaan loogu kaalmeyn, waxaanan jeclaan lahaa bal inaad commentiyada dadka reebeen dib ugu moqoto aragtana meel ka dhaca culumada, aniga waxaan islaax aheyn ma raadinaayo waan dareemi karraa dadku inay danu,suu u badan yihiin Allah ayaanse ka kaalmo weydiisanayaa waxa ay ii maleegayaan walaahumustacaan.
Reply	Abu-Wehliye says:	May 9, 2012 at 7:49 pm	Asalaamu caleykum waraxmatulaahi wabarakaatuhu,
(Ilaahayow xaqa inatus oo kuwii raacana naga dhig
Waxa khaldan inatus oo kuwii ka fogaadana inaga dhig)
Dhibaatada maanta ina heysataa waa mid Ilaahey oo kaliya ka saari kara Ummada Islaamka. Koox ama Qof waliba waxay maalmahaan sheegtaan inay xaq kutaaganyihiin.
Laakiin waxaa xaqiiqa ah in badinkeena aanu lunsannahay, maxaa yeeley Ilaahey Kitaabka Quraanka markii uu Nabi Maxamad (صلي الله عليه وسلم) ku soo dejiyey asigaa looga dhigey inuu Ummadiisa uu fahamsiiyo. Ummada islaamkana waxaa waajib ku ah ineey raacdo Kitaabka ilaahey iyo Sunnada nabigiisa(صلي الله عليه وسلم). Hadaan u soo laabto arinta dastuurka
Marna muslimiinta ma-dejin karaan Dastuur ka hor immaanaya Kitaabka Ilaahey iyo Sunnada Nabiga Maxammad(صلي الله عليه وسلم).
Nabigga waxaa laga wariyey inuu yiri ( أنتم أعلم بأمور دنياكم)
Sharci ahaan dejinta Dastuur ama Qawaaniin ineyy Ummadi dejisato majiro wax diidaya hadii ayan marna ka hor imaaneynin Kitaabka iyo Sunnada.
Reply	Rooble gagac says:	May 13, 2012 at 5:07 am	masha alaah waa halyeygiii somaliyed ilaahay haku daayo aqirana guri hakaga dhiso adoo dunida joogo waa ninkii kadagaalamay dimuquradinimo iyo xeer jabjab oo yiri aniga ilaahay ban utukudaah sharcigana ilaaha baah leh konkana kitaabka rabi baah lagu xukumin anaah labadaarod tan hore libintan siinay waaa waaa walalkaga nuslinka ahow yeel xukunka rabi intaadan niman waleeh ninkii xukunka rabi diido oo tukadah wuxuu lamid yahay nin jeesjeesay beyyyyy
Reply	Rooble gagac says:	May 13, 2012 at 5:44 am	to abu wahelye koonka ilaahay wuxuu ugu tala galay kitaabka rabi in lagu xukumo wixii kale ee sameeya xukun waxay ka dhigantahay rabi wuxuu ilaaway baan sixin sharcigaan baah kii ilaahay kafican gaal iyo muslin hasheegto qofka uuna gaaloobin inta kuraacdo iyo asaga xataa wixii raali kanoqdah ee hada isdabaqabo abu wehilya ninka labaxayow
Reply	Abu-Wehliye says:	May 13, 2012 at 6:13 pm	وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
Ku: Rooble Gagac,
بارك الله فيك يا اخي، وجزاك الله عنا خير جزاء
Walaal Ilaahey baan ka magan galey inaan ka mid noqdo kuwa diida xukunka ilaahey, waxaan ilaahey u baryayaa inuu soo hanuuniyo kuwa xokunka ilaahey xukun kale la mid dhiga…!
Walaal hadaan is ku dayo inaan wax ka iraahdo arinta xukunka waxaan jiclaan lahaa inaad su’aalahan aad iiga jawaabtid?
Nidaamka lagu doortey (سيدنا ابو بكر رضي الله عنه) inuu ummada Khaliifa u noqdo ma mid ra’yi ay is dhaafsadeen asxaabta buu ahaa ama waxkale?